Tutorials uye Manuals e iPhone | IPhone nhau
MuActualidad iPhone isu tinokubatsira iwe kuwana zvakanyanya kubva kune yako Apple foni kunyangwe iwe uri mutsva kuchinhu ichi uye usingazive pekutangira. Pakushandisa kwako unenge uine rese kuunganidzwa kwemanyorero uye dzidziso izvo zvinokudzidzisa iwe, nhanho nhanho uye nemifananidzo, zvaunofanirwa kuita zvisinei nekuti tinotaura nezveJailbreak, iOS kana chero imwe nyaya. Mune zvimwe zviitiko iwe zvakare uchawana vhidhiyo tutorials zvakakwana zvakakwana kuti usarase ruzivo rwekuita.
kubudikidza Miguel Hernandez inoita 1 zuva .
Zvishandiso zvenhare, ingave iPhone, iPad kana chero imwe mhando, zviri mukati mekusvikirwa kwevadiki ...
kubudikidza Ignatius Room inoita Mavhiki e4 .
Muchikamu chino tichakuratidza zvikonzero nei emoticons isingaonekwe pa iPhone. Maemoticons ari...
Apple yakaburitsa gadziriso yebhatiri rayo reMagSafe nerutsva kuti iko zvino simba rekuchaja rave ...
Chokwadi pane kanopfuura chiitiko chimwe iwe wakafunga nezve maitiro ekuona iyo iPad paterevhizheni kuti unakirwe nezvirimo ...
Kuchinja zvidhori zvemaapps pa iPhone kunotitendera kuti tipe kubata kwemunhu kune yedu iPhone iyo,…
Maitiro ekudzima zviziviso pa iPhone
kubudikidza Ignatius Room inoita 2 mwedzi .
Muchikamu chino tichakuratidza nzira yekudzima zviziviso pa iPhone, iPad uye iPod touch. Zviziviso…
Kana iwe uchangobva kuburitsa iPhone nyowani kana iPad, ungangove wakashamisika kuti AirDrop chii. Zviri zvakare…
Yako iPhone, kunyangwe ichive chigadzirwa chine software uye hardware inofamba pamwe chete ...
Maitiro ekuchinjisa mafoto kubva ku iPhone kuenda kune komputa
Maitiro ekudzima kana kudzima yako Facebook account
Nzira yekuziva nzvimbo yekupedzisira ye iPhone yako, kunyangwe ikabuda bhatiri